नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : अमेरिकामा काँग्रेसी साथीहरूको यो हाल छ !
अमेरिकामा काँग्रेसी साथीहरूको यो हाल छ !
सबै चिज गुमाउँदा पनि अझै होस आएन है मित्रहरू ?? आफै आफै मा तँ तँ र म म ?? आची गर्ने लाई भन्दा देख्ने लाई लाज भो, बन्द गर्नुस् यस्तो क्रियाकलाप । अमेरिकामा आउनुभाछ खुरु खुरु आफ्ना काम धन्दा गर्नुस्, नेपालको फोहोरी राजनीति यहाँ ल्याएर के पाउनुहुन्छ हो मित्रहरू ?? यही हो तपाईँहरूको राजनीतिक संस्कार ?? उता नेकपाको प्रवासी नेपाली मञ्च भित्र भाँड भैलो मात्र होइन फुटेर दुई वटा भाछन, लडिराछन् अझ नेपालमा फेरि फुटे भने कति टुक्रा हुने हुन यता पनि थाहा छैन । कठै हामी नेपालीहरू कहिले सुध्रिने हौँला ! हामी नै यस्ता भए पछि हाम्रा नेताहरू कस्ता होउन् त !!